Ingabe Igama Elithi “UmKristu” Lilahlekelwa Incazelo Yalo?
INqabayokulinda—Efundwayo | Juni 1, 2000
ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Arabhu Isi-Armenia (SaseNtshonalanga) Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Igbo Isi-Indonesia Isi-Osset Isi-Ukraine Isi-Urdu IsiBemba IsiBicol IsiChewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFinishi IsiFulentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiHiligaynon IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKannada IsiKinyarwanda IsiKorea IsiLatvia IsiLithuania IsiLozi IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMarathi IsiMoore IsiMyanmar IsiNgisi IsiNiue IsiNorway IsiNtaliyane IsiPapiamento (SaseCuraçao) IsiPedi IsiPolishi IsiPunjabi IsiPutukezi IsiRarotonga IsiRomania IsiSamoa IsiShayina SesiCanton (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiCanton (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShona IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiTelugu IsiThai IsiTonga IsiTswana IsiTurkey IsiTwi IsiVietnam IsiZulu
KUSHO ukuthini ukuba umKristu? Ubungaphendula uthini? Lowo mbuzo wabuzwa abantu abathile abaqokwa emazweni ahlukahlukene, futhi nazi ezinye zezimpendulo zabo:
“Ukulandela uJesu nokumlingisa.”
“Ukuba umuntu okahle nohlanganyela nabanye onakho.”
“Ukwamukela uKristu njengeNkosi noMsindisi.”
“Ukuya eMiseni, usho umthandazo weRosari futhi wamukele iSidlo.”
“Angikholelwa ukuthi kudingeka uye esontweni ukuze ube umKristu.”
Ngisho nezichazamazwi zinikeza uxhaxha lwezincazelo ezididayo. Empeleni, enye incwadi inezincazelo eziyishumi zegama elithi “umKristu,” ezihlanganisa ethi “ukukholelwa noma ukuba ingxenye yenkolo kaJesu Kristu” nethi “umuntu ohloniphekile nowamukelekayo.” Akumangalisi ukuthi abaningi bakuthola kunzima ukuchaza ukuthi kusho ukuthini ukuba umKristu.
Namuhla, phakathi kwalabo abathi bangamaKristu—ngisho naphakathi kwamalungu esonto elifanayo—umuntu angathola imibono ehlukahlukene kakhulu ezindabeni ezinjengokuphefumulelwa ngokwaphezulu kweBhayibheli, inkolelo-mbono yokuziphendukela kwemvelo, ukuhileleka kwesonto kwezombangazwe nokuhlanganyela komuntu ukholo lwakhe nabanye. Izindaba zokuziphatha, njengokukhipha isisu, ubungqingili, imibhangqwana ehlala ndawonye ingashadile, zivame ukudala impikiswano evuthayo. Akungabazeki ukuthi kunokuthambekela kokuyekelela.
Ngokwesibonelo, iphephabhuku i-Christian Century libika ukuthi muva nje esinye isigungu sokwahlulela sesonto lobuProthestani savotela ukusekela ilungelo lesonto “lokumisa ungqingili owaziwayo njengomdala emkhandlwini walo obusayo.” Ezinye izazi zemfundiso yenkolo ziye zanikeza ngisho nombono wokuthi ukuba nokholo kuJesu akuyona into esemqoka ukuze umuntu asindiswe. Umbiko okuyi-New York Times uthi lezi zazi zikholelwa ukuthi amaJuda, amaSulumane nabanye “bangase bangene ezulwini [njengoba kunjalo ngamaKristu].”
Uma ungase ukwazi, ake ucabange ngomuntu wenkolo kaMarx ekholelwa esimisweni sokuhweba ngokukhululekile noma umuntu othuthukisa umbuso wentando yeningi ekhuthaza ubushiqela noma umuntu okhuthaza ukongiwa kwemvelo esekela ukucekelwa phansi kwamahlathi. Ungase uthi: “Lowo muntu akanakuba umuntu wenkolo kaMarx noma umuntu osekela umbuso wentando yeningi noma umuntu wokongiwa kwemvelo”—futhi uyobe uqinisile. Nokho, lapho ucabangela ukuhluka kwemibono yalabo abathi bangamaKristu namuhla, ubona izinkolelo eziphikisana ngokuphelele futhi ngokuvamile eziphikisana nalokho uMsunguli wobuKristu, uJesu Kristu, akufundisa. Lokho kusho ukuthini ngegama abazibiza ngalo lokuthi bangamaKristu?—1 Korinte 1:10.
Sekuyisikhathi eside sikhona lesi sifiso sokushintsha izimfundiso zobuKristu ukuze zivumelane nomoya okhona ngaleso sikhathi, njengoba sizobona. UNkulunkulu noJesu Kristu bazizwa kanjani ngoshintsho olunjalo? Ingabe amasonto asekela izimfundiso ezingaveli kuKristu angazibiza ngokufanelekile ngokuthi angamaKristu? Le mibuzo izocatshangelwa esihlokweni esilandelayo.
Thumelela Thumelela Ingabe Igama Elithi “UmKristu” Lilahlekelwa Incazelo Yalo?
w00 6/1 k. 3
Ukushintsha Kwesimo ‘SobuKristu’—Ingabe Kuyamukeleka KuNkulunkulu?
Ukwazi UNkulunkulu Onothando
Gcina ‘Ithemba Lakho Lensindiso’ Ligqamile!
‘Zisindise Wena Nabakulalelayo’
Ngasizwa Ukunqoba Amahloni
Umculo Ojabulisa UNkulunkulu
Ungasitholaphi Iseluleko Esihle?
Okubhaliwe Izindlela zokudawuniloda izincwadi INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO Juni 1, 2000
Thumelela Thumelela INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO Juni 1, 2000
INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO Juni 1, 2000